Manjaro inotibvumira kudzikisira software. Saka unogona kuzviita | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura, KDE yakaburitswa Plasma 5.20, yazvino uye nyowani nyowani vhezheni yako yakajeka. Pamambure ndakaverenga zvirevo kubva kuvashandisi vanotova nazvo yakaiswa muManjaro, asi haisati yasvika kune chero kuisirwa kwangu. Kubva pakuonekwa kwayo, yatove pamatanho Kusagadzikana and the bazi rekuyedza, asi kumhara hakusi pamutemo izvozvi. Iyo kambani inomirira mazuva mashoma kuti ive nechokwadi chekuti zvese zvinoshanda zvakakwana usati waisa kune yakagadzikana chiteshi, asi Manjaro inosanganisirawo chishandiso chekudzivirira matambudziko kana software inoratidza maitiro asina kujairika.
Uye ndeyekuti imwe yemashoko andakaverenga ndeyekuti Plasma 5.20 ine bhagi rakanetsa mupi werondedzero, izvo zvakange zvamuita kuti adembe pakuvandudzwa. Asi Manjaro haizivikanwe seimwe yeakanakisa kugoverwa kweLinux pasina, asi mashandiro ayo uye nezvesarudzo yainopa, mukana wekudzikisira software yako (kudzikisira). Tevere isu tichaenda kukuratidza maitiro ekuzviita, kunyangwe kutanga tichifanira kupa yambiro.
Saka iwe unogona kudzikisira iyo Manjaro software
Yambiro inoonekwa zvese pa Wiki maitiro ekuderedza mapakeji sekumugumo patinoedza kuzviita. Yambiro iyoyo inoti mapakeji anotorwa kubva ku ALA (Arch Linux Archive) anoita shanduko huru kuhurongwa uye izvo kudzikisira isu tinogona kusangana nematambudziko atisingatarisiri. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve nehanya neizvi, asi zvinogona kuve zvinoshanda zvakakwana kana izvo zvatiri kuda kurodha pasi software senge webhurawuza.
Nezvataurwa pamusoro apa, maitiro acho ari nyore:
Isu tinoisa iyo «downgrade» chishandiso nemirairo inotevera:
Kana chishandiso changoiswa, iwo murairo unenge uri "kudzikisira package_name", pasina makotesheni uye nekushandura "package_name" kune software pachayo, asi izvi zvinongoshanda chete mukuyedza vhezheni yesisitimu inoshanda. Mune shanduro dzakagadzikana, iwo murairo unenge uri unotevera:
Mushure mekurova chiziviso, meseji inowoneka inotsanangura chaizvo zvatatoita, asi munguva pfupi yapfuura shanduro dzese dzatinogona kushandisa dzinoonekwa, sezvatinoona mukutorwa kwemusoro. Chinhu choga chakasara kuti uite kuisa nhamba uye kubvuma. Kana tichida kubvisa nhumbu, tinofanirwa kushandisa nzira pfupi Ctrl + C.
Ini pachangu, ndinofunga iri sarudzo inonakidza kwazvo iyo, yakawedzera mashandiro anoita system, iyo zvinyorwa zvepamutemo, Snap, Flatpak, AUR uye zvese zvimwe zvinoratidza kuti tiri kutarisana nesarudzo huru yandiri kutoshandisa mumapoka maviri akasiyana uye nekukurumidza ichawedzera mhuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekudzikisira pasi software yakaiswa paManjaro
Hukuru, ndatenda iyo info, inobatsira kwazvo.
Sei ndakasiya Windows. Akaunti yezviitiko zvako
Kubuda ropaTooth, kushomeka muLinux kernel iyo inobvumidza kodhi kuitiswa kuburikidza neBluetooth